Umgomo oyinhloko womsebenzi wesitolo sethu se-intanethi ukunikeza wonke umuntu ithuba lokuthenga izesekeli ezisiza ukubuyisela imishini yomzimba womzimba womuntu.
Izifo zamalungu, emuva nangentamo, hernia, njll ngeshwa, zibonakala zibonakala phakathi kwabantu. Ubuhlungu obungenakubekezeleleka, ubunzima bokuhamba, ukukhubazeka okuphelele - konke lokhu kudinga ukusesha okuqhubekayo kwezindlela ezintsha nezindlela zokulwa nezifo ze-orthopedic. Izikhungo zezokwelapha emazweni amaningi zihlakulela njalo amadivaysi angenza ukuphila kube lula kubantu abahluphekayo.
Isitolo se-Inthanethi i-Ortokomfort ayishiyi inkinga yomunye umuntu
Umuntu ophethwe isifo samagciwane angeke ashukuthele, uma othile enenkinga ngamalunga emilenze, nabo ngeke bakwazi ukuzungeze izitolo ezikhethekile eziyishumi nambili ukufuna ibhande elidingekile noma i-corset. Isitolo sethu se-intanethi sinikeza zonke izimo zokuthola nokukhetha izesekeli ze-orthopedic.
Uma sibheka ikhathalogu yesayithi lethu, ungaqiniseka ngokulula kokusetshenziswa kwayo. Ochwepheshe bethu baye banciphisa ubunzima abantu abaningi abanakho lapho usebenzisa i-intanethi. Kusuka ekhasini eliyinhloko, edabula izigaba, uzothola kalula imikhiqizo edingekayo.
Amakhasi wesayithi aqukethe imikhiqizo eminingi yama-orthopedic. Esitolo se-inthanethi ungathenga imikhiqizo eyenzelwe indawo ngayinye ethile yomzimba. Ngemva kokubonisana nabaphathi, uzothola ulwazi mayelana nosayizi nemisebenzi yomkhiqizo okhethiwe. Ifa lokuzikhethela esitolo noma i-Ortokomfort ikuvumela ukuthi ungalinganisanga ububanzi bominyaka yamakhasimende ethu. Sizosiza izingane, asebekhulile, abesifazane abakhulelwe kanye nabantu abaye bahlukunyezwa, okwenza kube lula, ukuhlukanisa noma ukulimala.
Imikhiqizo ye-Ortocomfort chain of stores ihlanganisa:
Ama-bandages ezinxenyeni ezahlukene zomzimba;
Iziphakamiso ezikhethekile kwabesifazane abakhulelwe nabesifazane emva kokubeletha;
Amathayiphi nezintambo zokulungisa izitho.
Asizange sikhohlwe ngezimpahla ezihambisana nalokhu. Phakathi kwemikhiqizo yesitolo kunama-walkers, izinti, ama-crutches, ama-insoles omzimba kanye nezinto eziningi eziwusizo kakhulu.
Yebo, ngoba ngaphezu kokukhethwa kwemikhiqizo yethu kukhethwe ochwepheshe bezobuchwepheshe emkhakheni wama-orthopedics. Yonke imikhiqizo imelwe ngabakhiqizi abaziwa. Sizosiza njalo ngokuzikhethela futhi, uma kunesidingo, sinikeze ukulethwa. Amanani wemikhiqizo yethu agxile esimweni ukuthi amaklayenti ethu adinga usizo. Futhi ububele kumakhelwane - ngaphezu kwakho konke!
Ukuhlanza ngaphandle kwezinkinga, noma ukususa kanjani ama-greasy stains
Ukugeza mshini tank amanzi: idivayisi iphinde nenqubo yokukhetha